NY SAMPANA AO AMIN’NY FIANGONANA FJKM
EVANGILE DE LA RESURRECTION ET POLITIQUE.
Ny KRIZY : fomba fintantanana azy.
NY Fanisam-bahoaka ao amin’ny Fiangonana (recensement)
Article publié le lundi 26 septembre 2016.
MIAVAKA AMIN’NY SOATOAVINA TIA MANAO NY TSARA NY PROTESTANTA
Anisan’ny soatoavina (valeurs) protestanta ny fanaovana ny tsara amin’ny atao rehetra. Ilaina hatrany anefa ny mametraka ireo zavatra hahafantarana izany, mba tsy hahavery azy.
ATAOVY TSARA IZAY TSARA ATAONAO
Aza mionona fotsiny amin’ny hoe efa manao izay tsara aho, toy ny hoe tsy mangalatra na mandainga. Tsy manao kolikoly aho, efa manampy ny mpiara-belona aho. Tsy ampy ho an’ny Soatoavina protestanta izany, fa rehefa manao ny tsara izy, dia ataony lafatra izany zavatra izany. Io fikatsahana ny lafatra amin’ny zavatra ataony io dia manamarika mihitsy hoe Protestanta ny mpino iray.
REHEFA VITA TSARA NY ZAVATRA ATAONAO, DIA MANGINA NY MPITSIKERA, ARY AFA-PO NY REHETRA
Tsy ilaozana mpitsikera ny asa natao na ny soa vita. Efa kolontsain’ny olona sasany rahateo ny mitsikera, ka dia ampoizina fa hiteny an’izany hatrany izy ireny. Miteraka fahakiviana sy fialana tsy hanao intsony anefa ireny fitsikerana ratsy tsy misy fijanonany ireny. Ireo olona tokony hanaovana soa koa, vokatr’izany, dia tsy hahazo izany intsony. Tsotra ny fomba handresena ny mpitsikera : ataovy lafatra izay zavatra ataonao, dia hangina izy.
NA TONDROINA HO RATSY AZA, DIA MAHAVITA NY TSARA HATRANY
Izay miasa ihany no voateniteny ho tsy mahay, ratsy fiasa, tsy mahafa-po. Mety manampy ihany ireny teny ratsy faheno amin’ny olona miasa ireny, mba hampivoatra azy. Rehefa tsy misy afa-tsy izany hatrany anefa, dia hihemotra sy hitsoaka an-daharana amin’ny farany. Dia jereo ny vavan’ny akoho : bingo, fa mahahinan-kanina sady mahasotro rano tsara ! Ny fandehan’ny alika : mivilina, fa lasa lavitra !
VITAO ARA-POTOANA NY TSARA ATAONAO
Tena zava-dehibe ary ny fanaovana ho lafatra izay ataon’ny Protestanta. Aza hadinoina hatrany anefa, fa na dia vita tsara sy lafatra aza ny zavatra iray, rehefa tsy vita tamin’ny fotoana nilana azy, dia toy ny tsy vita sy tsy nisy ihany. « Ranomaso tsy miaraka amam-paty » izany. Io fahadisoam-potoana io no fahavalon’ny fitantanana voalohany indrindra. Aleo mandà tsy hanao , toy izay manao nefa tsy ho vita ara-potoana.
Mercredi 8 Avril 2020 - 20:31:41